Nagarik News - जसले मौलिक ज्योतिष ग्रन्थ पत्ता लगाए
म विसं २०३५ फागुनमा पृथ्वीनारायण क्याम्पस, पोखराबाट नेपाल र एसियाली अनुसन्धान केन्द्र काठमाडौंमा सरुवा भएर आएँ । म पोखरामा छँदा नै गुरु पण्डित नयराज पन्तका चेला भोलानाथ पौडेलका छोरा सामनाथबाट इतिहास संशोधन मण्डल र नयराज गुरुबारे थाहा पाइसकेको थिएँ ।
म काठमाडौं आएपछि नेपाल र एसियाली अनुसन्धान केन्द्रका तात्कालिक कार्यकारी निर्देशक प्रा. डोरबहादुर विष्टज्यूले मलाई धनबज्र बज्राचार्यज्यूको निर्देशनमा रहेर अनुसन्धानात्मक काम गराउनुभयो । नेपाल र एसियाली अनुसन्धान केन्द्रमा नै प्राज्ञ ज्ञानमणि नेपालज्यूसँग मेरो परिचय भयो । त्यसपछि नयराज गुरुबारे धेरै कुरा जान्नबुझ्न पाएँ ।
म ओटु, सबलबहालमा उहाँलाई भेट्न गएँ । उहाँका जेठा छोरा महेशराज पन्तले संस्कृत भाषा बोलेर मेरो विषयमा कुरा गर्नुभएको मलाई असाध्यै रमाइलो र मिठो लाग्यो ।
विसं २०३६ वैशाखमा वीरगन्जको पिपरामठमा विश्व हिन्दु सम्मेलनको आयोजना गरिएको थियो । वाल्मीकि विद्यापीठका प्राध्यापकहरूसँग म पनि विश्व हिन्दु सम्मेलनमा भाग लिन वीरगन्ज गएँ । त्यही बेला नायब बडागुरुज्यू माधव भट्टराई र नयराज गुरुका कान्छा छोरा दिनेशराज पन्तसँग मेरो परिचय भयो । उहाँहरू दुईजनासँगको मेरो संगत अहिले पनि प्रगाढ छ । र, अझै पनि प्रगाढ नै रहिरहनेछ ।
त्यसपछि नयराज गुरु नेपाल राजकीय प्रज्ञा प्रतिष्ठान, प्राज्ञ परिषद्को सदस्य हुनुभयो । त्यसबेला प्रत्येक प्राज्ञ सदस्यले तीन–तीन महिनामा आ–आफ्नो विषयमा प्रवचन दिने चलन थियो । म नयराज गुरुको प्रवचन बडो चाख राखेर सुन्न जान्थेँ । मैले नेपाली इतिहास, संस्कृति र पुरातत्व विषयको एमए परीक्षामा नेपालको एकीकरणमा गुरुङहरूको भूमिका विषयमा शोधपत्र लेखेको थिएँ । मेरो उक्त शोधपत्र तत्काल पुस्तकका रूपमा प्रकाशित भयो । पुस्तक प्रकाशित भएपछि म गुरुलाई पुस्तक चढाउन नेपाल राजकीय प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा गएँ ।
उहाँले 'पुस्तकको कुनै पाना पल्टाएर पढ्नुहोस्' भन्नुभयो । मैले पुस्तकको एउटा पाना पल्टाएर पढेँ । काजी नरसिंह गुरुङ सम्बन्धी उल्लेख भएको पाना रहेछ । त्यसपछि उहाँले मुसुक्क हाँसेर 'ठिक हो' भन्नुभयो ।
उहाँले अहिले ठमेल, त्रिदेवी मार्गमा रहेका तीनवटा देवल भएको जग्गा काजी नरसिंह गुरुङको हो भन्नुभयो । काजी नरसिंह गुरुङको खायल काजी अमरसिंह थापाले पाएपछि त्यस जग्गामा काजी अमरसिंहले ती तीन मन्दिर बनाएका हुन् ।
नयराज गुरुको जीवनी र आदर्शबाट आज हामीले धेरै कुरा सिक्न सक्नुपर्छ । उहाँका कृतिमा मलाई 'लिच्छवि सम्बत्को निर्णय' शीर्षक पुस्तक अतिप्रिय लाग्छ, किनभने म पनि ज्योतिषशास्त्रमा केही चासो राख्छु । यो पुस्तकलाई शिर–पुछारसम्म छिचोलेर पढ्न सक्ने शक्ति र सामथ्र्य मसँग छैन । तापनि यो पुस्तक ज्योतिष जगतका विज्ञ एवं जिज्ञासुहरूका लागि अतिउपयोगी छ ।
आद्य जगतगुरु शंकराचार्यले वेदान्त दर्शनको सिद्धान्तलाई आधा श्लोकमा टुंग्याइदिनुभएको छ । जस्तै–
श्लोकाद्र्धेन प्रवक्ष्यामि यदुक्तं ग्रन्थकोटिभिः ।
ब्रह्म सत्यं जगन्मिथ्या जीवो ब्रह्मैव नापरः ।।
यसैगरी नयराज गुरुले ज्योतिषशास्त्रको सायन एवं निरयण सिद्धान्तलाई दुइटा वाक्यमा अथ्र्याइदिनुभएको छ । उहाँका अनुसार आकासमा रहेका ग्रहहरूको अवस्थिति तथा आकासका ग्रहहरूको घटनासँग प्रत्यक्ष मिलेका संक्रान्ति सायनसंक्रान्ति र त्यस सम्बन्धमा ज्योतिषीहरूले गरेका गणना अर्थात् ग्रन्थबाट गणना गरेर ल्याइएका संक्रान्ति निरयणसंक्रान्ति हुन् । आजकाल सायन एवं निरयण अर्थात् आकासको ग्रह परिस्थिति र त्यस सम्बन्धमा ज्योतिषीहरूले गरेका गणनाको बीचमा २३–२४ दिनको अन्तर पर्दछ । अतः सायन र निरयण सिद्धान्तलाई ज्योतिष जगतले एउटा समस्याको रूपमा लिएको छ ।
यसका अतिरिक्त उहाँले यही सायन र निरयणकै आधारमा सुमतितन्त्रलाई विसं ६३३ देखि विसं ९३७ भित्रको कुनै समयमा नेपालमा रचना गरिएको मौलिक ज्योतिष ग्रन्थ हो भनेर प्रमाणित गरिदिनुभएको छ । यसरी नयराज गुरुको अथक प्रयासबाट एउटा नेपाली मौलिक ज्योतिष ग्रन्थको पत्ता लागेको छ ।
यसैगरी, उहाँले कालचक्रतन्त्रको विमलप्रभाटीकामा पनि अध्ययन गर्नुभएको छ । कालचक्रतन्त्र एउटा महŒवपूर्ण बौद्ध ग्रन्थ हो । कालचक्रतन्त्रमा ज्योतिषशास्त्रको पनि विवेचना गरिएको छ । कालचक्रतन्त्र मूल ग्रन्थ हो र विमलप्रभाचाहिँ यसको टीका हो । इसं १०२७ मा कश्मिरी पण्डित सोमनाथले तिब्बती भाषामा कालचक्रतन्त्रको अनुवाद गरेका थिए । त्यही समयदेखि तिब्बती ज्योतिषशास्त्रमा भारतीय ज्योतिषशास्त्रले प्रवेश पाई चिनियाँ ज्योतिषशास्त्र र भारतीय ज्योतिषशास्त्रको समन्वयबाट तिब्बती ज्योतिषशास्त्रको विकास भएको थियो ।
यसरी नयराज गुरुले इतिहासका अतिरिक्त ज्योतिष जगतमा अभूतपूर्व निर्णायक योगदान दिनुभएको छ । अतः उहाँ एउटा युगपुरुष तथा मूर्धन्य व्यक्तित्व हुनुहुन्छ ।
(लेखक नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय, राष्ट्रिय सांस्कृतिक अध्ययन केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक हुन् ।)
सहरको मौसम बदलिएको थियो। बर्सातका छिटाहरू बादलको घैलाबाट उम्किएर जमिनमा झर्न सुरु गरिसकेका थिए। अविरल झरी बर्सने दिनहरू पर क्षितिजको कुनोबाट चिहाइरहेजस्ता लाग्थे। पाटनका गल्लीसँग अन्योन्याश्रित हुँदै बरालिएका नस्टाल्जियाहरू मनभित्र...
आशामै बित्यो सात महिना
रसुवा- वैशाख १२ को भूकम्पपछि सरकारले पुनर्निर्माणको प्रक्रिया छिट्टै अगाडि बढाउने जनाए पनि रसुवा र नुवाकोटका भूकम्पपीडित अझै अन्यौलमा छन्। पुनर्निर्माण प्राधिकरणको काम अगाडि बढ्न नसक्दा पीडितहरू भूकम्प प्रतिरोधात्मक घर...
बुढ्यौलीमा तन्नेरी जोस
त्रिभुवन विश्वविद्यालय, ग्रामीण विकास केन्द्रीय विभागका प्राध्यापक डा. प्रेम शर्मा फुर्सद मिल्नेबित्तिकै डाँडापाखा चहार्छन्। कहिले विद्यार्थीसँग, कहिले पत्रकारसँग अनि कहिले अरूसँग। अनुसन्धान गर्न २०४३ सालदेखि घुम्न थालेका। ५ वर्षयता भने...
गोयाङको तिख्खर राग
'गोयाङ' (किनामा) किरात खाद्य परिकार हो। यसैको मौलिक सुगन्धलाई पहिचानको अस्त्र बनाउँदै कविता–यात्रामा निस्किएका छन्, अर्जुन खालिङ। संग्रहको आवरणमा पोतिएको रातो, निलो र पहेँलो प्राथमिक रङजस्तै अर्गानिक हो 'गोयाङ'।
बसन्तपुर, तेह्रथुम– तेह्रथुम बसन्तपुर बजारकी छिरिङ फुटिक शेर्पाले सात मिटर जग्गा किनिन्, ६० हजारमा। उत्तिखेरै रंगीन टिभी किनिन्, त्यति नै पैसामा। यो आजको होइन, २०५३ सालको कुरा हो। गुराँसको राजधानी अर्थात्,...